Prati, otu n'ime obodo ndị kachasị oke ọnụ na Rome | Njem zuru oke
Prati, otu n'ime obodo ndị kacha nwee ọnụ ahịa na Rome
Rome ọ bụ obere obodo enwere ike iji ụkwụ chọọ ya. A na-atụ aro ịgagharị n'ọtụtụ mpaghara ya na ụbọchị anwụ na-acha, yabụ na njem a ị gaghị echefu ọmarịcha ịma mma ma maa mma agbata Prati.
Prati bụ ebe a maara ama maka ụzọ ya, ụlọ ya mara mma yana ya amara nke Europe. Ọ nwere ọtụtụ ụdị mmadụ, ọ dị ka Paris, yabụ taa anyị ga-ahụ ihe anyị nwere ike ime gburugburu ebe a.
2 Ihe ịga leta na Prati
Ọ bụ Nke iri abụọ na abụọ na nkeji iri na ise nke Rome na uwe agha ya gụnyere Mausoleum nke Hadrian, otu n'ime saịtị ngosipụta ya kachasị mma (ọ bụ ezie na ọ bụ nke Borgo n'ezie). Ma gịnị bụ akụkọ ihe mere eme nke ọmarịcha ógbè ndị Rom a?
O yiri ka n’oge alaeze Rom, ubi vaịn na osisi dị n’ala ndị aN'ihi ya, a na-akpọ ya Horti Domitii, ọ bụkwa nke nwunye Domitian. Mgbe e mesịrị, ọ gbanwere aha ya, ka Prata Neronis, na mgbe emepechabeghị aha ya Prata Sancti Petri ma ọ bụ ubi San Pedro.
Mpaghara ahụ nọgidere na-acha akwụkwọ ndụ ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe nke narị afọ nke XNUMX, n'etiti ọhịa, apịtị na ala ịta ahịhịa ebe ọ bụ na a ka nwere ụfọdụ ugbo ebe ahụ, ọkachasị na mkpọda Monte Mario. Ma na 1873 onye nwe otu akụkụ buru ibu nke ala ahụ, bụ Xavier de Mérode, bịanyere aka na obodo ahụ iji bido nwee mpaghara ọhụrụ. Afọ iri gafere tupu ụlọ mbụ ahụ hụrụ ìhè.
Otú ọ dị, agbata obi ahụ dịpụrụ adịpụ ruo ogologo oge n'ihi na enweghị ezigbo akụrụngwa ọ dị ka ọ dịpụrụ adịpụ. N'ezie, Mèrode n'onwe ya kwụrụ ụgwọ site na akpa ya maka ọrụ nke akwa mmiri iji mepe ụzọ nkwukọrịta. Ọ bụghị ruo na mmalite nke narị afọ nke XNUMX ka obodo ahụ malitere itinye batrị iji dozie nsogbu obodo nke mpaghara ahụ. Kedu ? Ihu ọma ebe a ka e wuru ụlọ ọrụ nlekọta nke Alaeze ọhụrụ nke oftali.
E mere ihe ndozi nke okporo ámá ahụ na otu ihe: Kedu n'aka onye ọ bụla n'ime ha nwere ike ịhụ nnukwu ụlọ ụka San San Pedro. N'oge ahụ, mmekọrịta dị n'etiti Vatican na gọọmentị ọhụrụ abụghị nke kachasị mma, yabụ na ọ bụghị n'okporo ámá ma ọ bụ square gburugburu ebe a nwere aha ndị popu ma ọ bụ ndị nsọ.
Ọrụ ndị ahụ gụnyere ịjuju ala, ka ọ ghara ịta ahụhụ idei mmiri nke Osimiri Tiber, ma ọ dịghị mfe ma ọ bụ n'ihi oke mmiri nke ala ahụ. Ma, agbanyeghị, ụlọ ọhụrụ bidoro ịpụta dị ka ero, ha niile bụ n’ọkara mbụ nke narị afọ nke iri abụọ na otu okporo ámá ndị ahụ.
Isi n'okporo ámá ndị dị na Prati bụ Site na Cola di Rienzo, na Via Cicerone, na Marcantonio Colonna na Lepanto. Okporo ámá ndị a niile bụ obi Prati. N'ebe ugwu agbata obi Della Vittoria dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ya na mpaghara Flaminio, n'ebe ndịda ya na Ponte na ọdịda anyanwụ ya na Trioinfale.
Ihe ịga leta na Prati
Ka ị na-agafe okporo ámá na ámá ndị a kpọrọ aha ndị mmadụ nke Alaeze Ukwu Rom ị ga-ahụ ụfọdụ ọmarịcha ụlọ dị ka ụlọikpe ma mara mma Rilọ ihe nkiri nke Adriano. Emepere theaterlọ ihe nkiri a na 1898, taa ọ na-arụ ọrụ dị ka sinima ma dị na La Piazza Cavour.
N'akụkụ ya, e wuru Obí Ikpe Ziri Ezi n'etiti 1888 na 1910 ma ewere ya dị ka nnukwu ụlọ, otu n'ime ihe kachasị mkpa mgbe ekwupụtachara Rome dị ka isi obodo nke Alaeze oftali. N'ihi ọdịdị nke mbara ala ahụ, nke nwere oke iru mmiri, a ga-enye ya nnukwu ntọala siri ike nke dịgidere ruo afọ 70 nke narị afọ nke XNUMX mgbe ekwesiri ịkwado ya ọzọ. Ọ bụ baroque na ụdịdị RennesỌ dị 170 mita 155 mita ma bụrụkwa nzu nzu travertine.
Prati ọ bụ ebe dị jụụ, a mma ọzọ ma á »bá» you rá »you na á» ‹chá» ghá »‹ hustle na naa. Ejikọtara ya na obodo ndị ọzọ, mana ọ ka bi na jụụ. Ọbụna ọ bụ ezigbo nchebe, ebe obu na obu na amughi site na ngozi nke Vatican, ebe obibi Pope di ezigbo nso.
Yabụ ihe kachasị mma mmadụ nwere ike ime na Prati bụ jee ije, tufuo n’okporo ámá ya. Nwere ike ịmalite site na Vatican n'onwe ya, gaa na St. Peter's Basilica ma ọ bụ Vatican Museums wee malite ịga ije. N'ihi ya, ị ga-agba ọsọ n'ime Chọọchị nke Obi Dị Nsọ nke Nhụjuanya, nke a makwaara dị ka Katidral Milan na obere maka na ọ nwere faoade neo-Gothic mara mma.
N'ime ebe a na-arụ ọrụ ahụ Ebe ngosi ihe omuma nke nkpuru obi nke Purgatory, a bit gbara ọchịchịrị, na foto nke ndị nwụrụ anwụ ... E wuru chọọchị ahụ na 1917. N'ime, e nwekwara akụkụ mara mma.
El Ama egwuregwu Olympic Ọ dịkwa na Prati. Emepere ya na 1953 n'agbanyeghị na akụkọ ntolite ya laghachiri na 20s n'ihi na enwere obere egwuregwu fasizim n'ebe ahụ. N'ebe a ka emere nmeghe na mmechi nke Olimpik Egwuregwu 1960 ma emezigharịrị ya kpamkpam maka iko FIFA Fifa 1990 na 2008 ọzọ.
Streetzọ ahịa kachasị mma na Prati bụ Via Cola Di Riezo. Ga-ahụ ụdọ nke ụlọ ahịa akwa, obere ụlọ ahịa, na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ. Ha nwere ọnụahịa dị mma karịa na etiti akụkọ ihe mere eme, yabụ ọ bụ ụzọ ọzọ dị mma iji chekwaa ego. Ndị bi ha? Ndi ode akwukwo, ndi ode akwukwo, ndi nwere ezigbo ugwo nihi na Ọ bụ otu n'ime ọnọdụ akụ na ụba kacha mma na Rome. Kpachara anya, echela na ọ bụ agbata obi a ma ama nke nwere ọtụtụ agagharị, mba, n'ezie, ọ bụ agbata obi na mpụga njem nleta na mgbe ụfọdụ ọbụlagodi ndị Rom anaghị abịa ebe a.
Ee, ee, ọ dị nso na St. Peter's Basilica na Vatican, mana ndị njem anaghị agakarị ya. Na ndị bịarutere na-agagharị n'okporo ụzọ Via Cola di Renzo, nke na-echekwa ụlọ ahịa ahụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ karịa, ị ga-agagharị ntakịrị. Iji maa atụ, nyere ya Mpaghara Viale Giulio Cesare, otu mpaghara agbụrụ dị iche iche ebe ndi mmadu n’uwa nile bi n’otu.
N'ụzọ doro anya, enwere ọtụtụ ndị Arab na ndị India ebe a, yana ụlọ ahịa azụmaahịa ha kwekọrọ. Ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga njem site n'Italytali, e nwere ezigbo ụlọ ahịa akwụkwọ, uringlọ Ọrụ Na-agagharị, nke nwere ihe niile maka ndị njem n'etiti nduzi na map. Ihe akpụrụ akpụ nke Dea Roma na-anabata anyị na Akwa Risorgimento. Ọ bụ Polish sculptor Igor Motoraj mere ya na ya nwere ihu ọma na mwute.
Ije ije ị ga-ahụ ọtụtụ Umbertino ụdị ụlọ, nke a na-ahụkarị na narị afọ nke XNUMX nke Italiantali na ọtụtụ -Dị ụlọ nke Art-Nouveau. E nwekwara ụlọ ndị nwere ọgụgụ isi, site na oge Mussolini, na ụfọdụ n'ime codị rococo. O doro anya na e nwekwara ụfọdụ ụlọ ọgbara ọhụrụ, dị ka ụlọ RAI, nke ejiri iko na enyo mee, ma ọ bụ obodo mbụ, ụlọ ụdị obi ọjọọ nke 1973 nke taa nwere windo mara mma. Nke nwere foto ị ga-ewere!
Ọzọ nke ndi nke Prati bụ Delle Vittorie, district na-eme atụmatụ na 1919 nke kachasị dị na gburugburu Piazza Mazzini nke ejiri ulo nke emere n'oge ndi fasist, tinyere ogige ndi mepere emepe. N'ime ụlọ ndị a niile anyị kpọpụtara aha ugbu a, echefula nkọwa ndị mara mma nke ukwuu n'ọnụ ụzọ, windo na mbara ihu.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgba ịnyịnya ígwè na Prati enwere ụfọdụ ụzọ ịnyịnya ígwè sitere na Viale Angelico ruo Castel Giubileo, mpaghara dịpụrụ adịpụ karịa nke dị n'ebe ugwu Rome. Ọ bụ a mara mma ije na-agba n'akụkụ osimiri ahụ na-efunari n'ọhịa ma ọ bụ ihe ga-abụ obodo Rome. Bikezọ igwe kwụ otu ebe ọzọ bidoro n'otu ebe mana ọ naghị aga, Piazza Cavour.
Enwere oghere dị ndụ na Prati? Ọfọn, enweghị ogige ntụrụndụ kwesịrị ekwesị nke na-echeta oge gara aga na ubi vaịn ya. Ọ bụ n'akụkụ osimiri, na bike ụzọ n'akụkụ ya nke bụ ebe ndị mmadụ na-agakarị ma ọ bụ na-agba ọsọ na ọ bụghị ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ikekwe ụfọdụ mmanya zoro ezo n'akụkụ mmiri ma ọ bụ n'ụgbọ mmiri.
Prati nwere ike ọ bụghị ebe kachasị ewu ewu na Rome mana ka m gwa gị nke ahụ ọ bụrụ na ị gaa na august ọ bụ oge kachasị mma nke niile. N'ezie, oge ọ bụla n'etiti July 1 na Septemba 7 bụ oge dị mma, n'ihi na ihu igwe dị mma, enwere ndị mmadụ n'okporo ámá na-agagharị, ị nwere ike ịga na Museum of Castel San't Angelo na abalị abalị, gafee elu- bilie n'okporo ụzọ nke Borgo Passetto, ebe Pope gbabara na Vatican gaa nnukwu ụlọ, ma nwee mmasị na dome nke St. Peter's Basilica n'ụzọ. Dị Oké Ọnụ Ahịa.
Iji mee njem a, ị ga-akwụ ụgwọ mana ya na otu tiketi ị nwere ike ịga ebe e wusiri ike na ụlọ nzukọ ya mara mma na patios ma ọ bụ gbagoo n'okporo ụlọ ma nwee ọmarịcha echiche panoramic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Prati, otu n'ime obodo ndị kacha nwee ọnụ ahịa na Rome
Shozụ ahịa na Sicily
Omenala Russia: Baba Yaga